Maalinta: Diseembar 11, 2018
Kaarka Dugsi Yareynta ee Ardayda laga soo bilaabo Kocaeli Magaalooyinka
Waaxda Korantada Magaalada Kobaneli ee Gaadiidka Dadweynaha '' Kaararka Safarka '' oo ay soo qabanqaabeen unugyada kaararka dhimista ardayda ayaa sii socda. 1 Nooca buuxa ee kaararka ardeyda ee aan fiisada lagu fiirin karin illaa Janaayo 2019 [More ...]
IMM waxay ku jirtaa Kooxda Dhaq-dhaqaaqa ee Hogaanka ah ee Yurub
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay ku guuleysatay inay noqoto tii ugu horreysay ee ku biirta Guddiga Dhaqdhaqaaqa Magaalada ee Machadka Cusboonaysiinta iyo Teknolojiyada ee Yurub. 13 Turkey ayaa markii ugu horeysay magaalada halkaas oo guddiga ururka, shirkadda iyo 17 18 ah [More ...]
Ergeyga cusub ee ERC ayaa booqday Mashruuca Tareenka ee AKH
Sentayehu Woldemicheal, maamulaha cusub ee loo magacaabay ERC iyo wafdiga la socda ee ERC, Erdem Arıoğlu, gudoomiye kuxigeenka Yapı Merkezi, Abdullah Kılıç, Maareeyaha Gobolka Bariga Afrika, Erhan, Maareeyaha Mashruuca ee Mashruuca AKH. [More ...]
Xirfadlaha Dalxiiska oo la Kulmaya Safarka Turkiga Fethiye
Kadib xilliyadii dalxiiska ee 2018 ee aadka u xiisaha badnaa, diyaar garowga xilliga dalxiiska 2019 ayaa bilaabmay. Iyada oo qayb ka ah diyaarinta xilli-cusub, ka qayb galka aqoonyahannada dalxiiska min Fethiye illaa carwooyinka gudaha iyo kuwa caalamiga ayaa sidoo kale sii xoogeystay. London bishii Nofembar [More ...]
Natiijada kiiska kacdoonka Mak-in Makine ee Kocaeli ayaa la shaaciyay. Kadib Poyraz Gıda iyo Ceylan Dil Et Mamülleri, Mak-in Makine Railway Shears Manufacturing Industry Industry [More ...]
Golaha Yurub ee Garoomada Diyaaradaha Caalamiga ah (ACI Europe) ayaa ku dhawaaqay warbixinteeda Oktoobar ee 2018. Marka loo eego, Madaarka Antalya wuxuu kaalinta koowaad ka galay Yurub marka loo eego kororka tirada rakaabka. Agaasinka Guud ee Maamulka Madaarada Gobolka [More ...]
Tarjubaan Cusub ee Baadhitaanka Xawaaraha Sare ee Baasaboorka Baaskiilka ee 2021
Ugu horreyntii, 2019 waxay bartilmaameed u ahayd tareenka xawaaraha sare leh. Ka dibna bartilmaameedkan waxaa loo beddelay 2020. Maareeyaha Guud ee TCDD intii lagu jiray kulamadii lagu qabtay Guddiga Baarlamaanka ee TGNA intii lagu jiray todobaadkii İsa Apaydın cusub [More ...]
Ku xigeenka Turkiga Ahmet Kılıç ayaa TCDD u kor u qaaday tareenka xawaaraha sare leh
Agaasimaha Guud ee Turkiga Railways (TCDD) İsa Apaydın 2021 oo ah taariikhda wadista xawaaraha-tareenka sare, xubin guddiga komishanka AK Party Bursa kuxigeenka Ahmet Kılıç ayaa dhulka dhigay. Tareenka xawaaraha sare ee Bursa [More ...]
IZBAN Weerar Lagu Qalqalmay
Maalinta koowaad ee usbuuca ayaa shaqo joojin ka bilaabatay Izmir. İzmir Suburban System Inc. (İZBAN) maamulka iyo heshiiska gorgortanka wadajirka ah ee wadaxaajoodka wadada tareenka 'TİS' laguma gaari karin wadahadalada udhaxeeya shaqaalaha IZBAN. Hel 300 maalintii [More ...]
IZBAN waxay sidoo kale saameeysay duulimaadka garoonka diyaaradaha!
Khadadka Izmir Aliaga-Selcuk oo u adeegaya inta udhaxeysa Izmir Suburban Systems (IZBAN), heshiiska gorgortanka wadajirka ah ee shaqo joojinta ayaa bilaabmay shalay. Go'aanka shaqo-joojinta kadib ee shaqaalaha BZBAN, kaliya Çiğli iyo garoonka diyaaradaha Adnan Menderes [More ...]
Sabiha Gokcen Metro 29 waxay furmaysaa Oktoobar 2019!
Musharraxa AK Party ee Degmooyinka Magaaladda Istanbul ayaan wali la shaacin, halka xukunka saddexda sano ah ee degmooyinka degmada uu sii wadayo magacyada dadka sida wanaagsan loo meeleeyay quluubta mashaariicda guuleysta. Guulihii laga gaadhay Istanbul [More ...]
Waxaa soo baxday in tareenka halkaas oo masiibada tareenka ee Çorlu ka dhacday in loo furay taraafikada la siiyay in xawaaraha kiiloomitir 4 uusan ka badneyn 25 maalmood shilka kadib. Marka loo eego warbixinta khabiirka, dadka 25 ayaa la diley, dadka 388 waa ay dhaawacmeen [More ...]
Rafaa baabuur Jarmal Volkswagen in Samee Factory Investment dalka Turkiga
mutaqbalka Jarmal Volkswagen (VW), ayaa isku diyaarinaya in ay maal-warshad si ay u bixiyaan sanadlaha 5 kun oo qof ka shaqeeya Turkey. In muddo ah hadda, waxay raadinayeen moodallo kala duwan oo ay qol uga dhiganayaan moodooyinka korantada ah ee xarumaha wax soo saarkooda ee Jarmalka. [More ...]
Baahida ugu sareysa ee ka jirta Bursa
8 milyan oo rakaab ah ayaa lagu qaadi doonaa tareen xawaare sare ku socda sanadkan, laakiin Bursa ayaa sii wadi doonta in laga joojiyo adeeggan. gaadiidka tareennada-xawaaraha sare ee horumar degdeg ah ugu muhiimsan ee Turkey ayaa lagu sameeyaa Bursa, Yenişehir Airport 7 [More ...]